Akaụntụ Banyere International na Banyere Banyere Mba Nile
Ozi Banyere Mba Nile
Akaụntụ mba ụwa bụ akaụntụ akụ nke mba ọzọ na-abụghị nke nke nwa amaala na ya. Banlọ akụ mba ofesi, ma ọ bụ ihe nzipụ akụ, na-ezo aka n'ihe ndekọ ego mepere emepe ego dịka otu n'ime agwaetiti Caribbean, Saịprọs, Luxembourg ma ọ bụ Switzerland. Usoro ahụ offshore sitere na Great Britain ma buru ụzọ kwuo na ụlọ akụ na-enweghị ebe ahụ. Dabere na akwụkwọ ọkọwa okwu nke Merriam-Webster, oke osimiri pụtara “dị ma ọ bụ na-arụ ọrụ na mba ọzọ.”
Ikekwe ihe ruru 50 pasent nke isi obodo zuru ụwa ọnụ na-agafe n'akụkụ mmiri. Iwu ụlọ akụ ndị a na-enye nnukwu nzuzo, iwu nchebe siri ike yana nnweta nkwụnye ego ụwa niile. Ndị mmadụ na-ejikarị akụ akụ mba ụwa maka nchedo akụ na ụba na mkpesa, mgbe ejikọtara ya na ntụkwasị obi nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Enweghi ego Bank Banyere
Imepe ụlọ akụ mba ụwa abụghị ihe dị iche karịa ka o mepere akaụntụ ụlọ gị. Justchọrọ naanị inye akwụkwọ ole na ole ọzọ. Na-enye ozi gbasara onwe gị na njirimara gị, ntụaka ma ọ bụ abụọ na nkwụnye ego gị. Mgbe ị na-emepe ụlọ akụ na mba ofesi, ụlọ akụ na-achọkarị paspọtụ edepụtara maka ya. Na mgbakwunye, ị ga-achọ ihe akaebe nke ebe obibi, dịka ụgwọ ọrụ, n'etiti ihe ndị ọzọ. Ihe ndị ịchọrọ ịnye dabere na ihe ndị chọrọ nke ụlọ ọrụ ahụ yana iwu obodo na nke ụwa.
Banklọ akụ nọ na ọdụ ụgbọ mmiri nwere ike ịrịọ maka akwụkwọ maka ụlọ akụ ugbu a. Ọ bụrụ na ịnwelarị akụ n'ụlọ akụ ọzọ, ụlọ akụ mba ofesi na-ahụta na ị nweghị ihe ọghọm. A na-emeju afọ a site na imepụta akwụkwọ ntuziaka na ụlọ akụ ị na-eji ugbu a.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ụlọ akụ dị n'okirikiri nwere ike ịchọ nyochaa isi mmalite ego na-abanye na akaụntụ ahụ. Ha nwere ike lelee ụdị azụmahịa ịchọrọ ị were n'ọrụ. Nke a bụ maka nchekwa nke ụlọ akụ. Ihe kpatara ya bụ na ụlọ akụ ndị dị n’akụkụ mmiri na-enwe nrụgide dị ukwuu iji hụ na ha anaghị etinye aka n’ihe ndị iwu na-akwadoghị. Ma ọ bụghị ya, ha ga-etinye onwe ha n'ihe ize ndụ maka mmachi ma ọ bụ mwepu ikike ikike ụlọ akụ.
Akaebe nke Isi Iyi nke Ego
Ọ bụrụ n’ị were gị n'ọrụ, ahịhịa na-akwụ ụgwọ ga-abụ afọ ojuju maka nnabata ego. Ego sitere na ala na ụlọ ma ọ bụ azụmaahịa azụmaahịa nwere ike ịchọ ihe akaebe nke sitere na ya site na nkwekọrịta, akwụkwọ mmechi na ihe ndị ọzọ. Akwụkwọ ozi sitere na ụlọ ọrụ inshọransị zuru ezu mgbe ị na-etinye ego na nkwekọrịta mkpuchi. Ọ bụrụ na eketa ego ahụ, onye na-eme ihe ma ọ bụ onye na-ahụ maka ihe ndị dị na ya nwere ike iziga ụlọ akụ. Banklọ akụ na-ahụkarị nwere ike jụọ ajụjụ banyere ego gị na-enweta na ebe ị na-ejide ego gị.
Uru dị na ịnweta sholọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwaọrụ guzobe akaụntụ gị bụ na anyị bụ ndị ruru eru ịmebata. Yabụ, anyị nwere ike igosipụta akaụntụ gị maka gị n'ọtụtụ ikike na-enweghị ịchọrọ ịkwaga mba ọzọ.
Banyere Banking Atụmatụ & Uru
Mgbe ị na-etinye ego n'ụlọ akụ n'ime ụwa, ị na-eji ọtụtụ uru dị iche iche nke ikike ndị mba ọzọ. Na mba ụfọdụ mbupụ ala Ewere ihe nzuzo dị oke mkpa, ịnye ozi nye ndị na-enweghị ikike bụ mpụ maka ndị ọrụ ụlọ akụ. Akaụntụ ụlọ akụ mba ụwa nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ nzuzo. Iji bulie ego nzuzo gị, ị mepee ụlọ akụ na aha ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri.
Uru ụtụ isi ị na-enweta na-adabere na obodo gị. Ndị US bụ ọmụmaatụ na-atụ ụtụ na ego zuru ụwa ọnụ. UK, Canada na Australia na-atụ ndị bi na ya ụtụ n'agbanyeghị ọnọdụ akaụntụ ahụ. Yabụ na ọ dị mkpa ịgbaso iwu ma nweta ụtụ isi na ndụmọdụ gbasara iwu.
Ebe ọ bụ na ọnụego arụmọrụ na-adịkarị ala, ụlọ akụ ndị dị n'ụsọ na-enyekarị ọmụrụ nwa dị elu karịa akụ ụlọ. Bankslọ akụ ndị dịpụrụ adịpụ nwere ike ịnye nchekwa ma ọ bụrụ na i bi n'ime obodo nke ego adịghị akwụsi ike ma ọ bụ gburugburu ebe ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụrụ na ọ bụ gị, itinye ego gị n'ụsọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji chebe ego gị. Concerned na-echegbu onwe gị banyere otu ọkàikpe mpaghara nke na-ahapụ ndekọ ego gị? Nke ahụ na - abụkarị ihe siri ike ịme mgbe ejidere ego gị n'ụlọ akụ.
Ọtụtụ ndị nwere ndị enyi na ndị ikwu nọ na mba ofesi. Akaụntụ ndị dị n’abụ bụkwa ebe dị mma ijide ego ma ọ bụrụ na ịchọrọ izigara ha ego. Eleghị anya onye ị hụrụ n'anya nke bi n'obodo ọzọ hapụrụ gị ihe nketa. Ọ bụrụ otu a, imepe akaụntụ na mba ahụ bụ ụzọ kachasị mfe iji nweta ego gị. Travel na-eme njem buru ibu gaa ụfọdụ elegharị anya na mba ofesi? Nwere ike ịchọ izere iburu nnukwu ego na njem gị. Ya mere, ịnwere ike ịhọrọ maka nnabata akụ mba ọzọ.
Gịnị mere mepee Akaụntụ Akaụntụ?
Ihe ndekọ ego ụlọ akụ mba ofesi nke ụlọ ọrụ dị na mpụga na / ma ọ bụ ntụkwasị obi na-enye ihe kachasị na nchedo onwe onye. Mgbe ụlọ ikpe obodo gị kwuru 'nyefee ego ahụ,' ndị na-ere ahịa nwere ike jụ ime ha. Ọ bụ ya mere ihe ndekọ ego ụlọ akụ mba ofesi jiri ntụkwasị obi na-echekwa maka nchebe bụ sọks kachasị ike.
Kwụ offkwụ shokwụ shokwụ shosọ bụ ezigbo ụzọ iji sonye na ohere itinye ego na mba ụwa. Organizationtù a mepere akaụntụ ụlọ akụ na ikike niile nke mba ụwa na arụ ọrụ dịka onye ruru eru inweta ruo na ọdụm kachasị mma nke Switzerland.
Otu n'ime arụmụka kachasị ike maka ịtọ akaụntụ akụ nke mba dị bụ iche. Pọtụfoliyo juru ebe niile na-abụkarị akụ, agbụ, ezigbo ụlọ, ọla dị oke ọnụ na ihe ndị ọzọ. Nke ahụ bụ, ịmụba akụ bara ụba na-apụtawanye karịa naanị itinye ego gị na klaasị bara uru dị iche iche. Ọ pụtakwara ọdịdị ala na usoro dị iche iche, nke ị nwere ike nweta site na iji akụ akụ dị n'okirikiri. Buru n'uche na ụgwọ mba United dị ugbu a dị elu oge niile, na-efu $ 22 trillion dị ka nke ederede a. Ọnụọgụ ndị ahụ pụtara na United States enweghị nsogbu. UK bụ £ 2.2 trillion ($ XNUM trillion) na ụgwọ. France na Germany karịrị nde euro 8 ($ 4.5 trillion) na ụgwọ.
Yabụ, inweta ego na ụsọ mmiri bụ ụzọ iji nye onwe gị nnukwu ego. Y’oburu na ego obodo gi ghapuru gi oke oke ego ojoo, ichoghi ka ha duru gi. Yabụ, ọ bụrụ na ịnwe ego na mpaghara echekwabara mgbe ndakpọ akụ na ụba na-eme n'obodo, ị ga - adị mma karịa ndị agbata obi gị. A sị ka e kwuwe, mba US wedara ala na Standard & dara ogbenye n'ihi ụgwọ dị ukwuu. Enwere naanị 16 S&P AAA mba ndị enyere ụwa ọnụ. US abụghị otu n'ime ha.
Ịhọrọ ego gị
N'adịghị ka ọtụtụ akaụntụ US, ụlọ akụ na-enye gị ohere ịhọrọ n'etiti ego dị iche iche iji jide ego gị. Ọtụtụ ndị na-etinye ego na-ahọrọ ijide akụ n'ọtụtụ ego. N'ihi nke a, ọ naghị emetụta ha ma ọ bụrụ na ike ịzụta dollar adalata adalata.
Otú ọ dị, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ uru ịhọrọ n'etiti ego dị iche iche, enwerekwa ihe ndọghachi azụ. Ị nwere ike ịkwụsị n'ihi ụtụ isi mba ọzọ na mmasị akwụpụtara. Ọ bụrụ na obodo ahụ nke ego gị nyefeworo ahụmahụ dị iche iche nlọghachite, ịkwụ ụgwọ ego ga-ekwe omume. Nke ahụ pụtara uru akụ na akụ gị nwere ike ịda. Enwere ike ime mgbanwe nke mba na mgbe ọ bụla, na nhazi mba nke ọzọ.
Nke ikpeazụ a bụ eleghi anya na ọtụtụ mba. Buru n'uche na ọtụtụ mba enweghị ike cybersecurity nke US. Yabụ, nsogbu ịnweta izu ohi amata ma ọ bụ mpụ ndị yiri nke cyber na-abawanye ntakịrị. Na mgbakwunye, ọtụtụ mba enweghị otu iwu nchedo ndị ahịa dị ka US. Nyochaa iwu nchedo ndị ahịa nke mba tupu ịmepe akaụntụ akụ ọzọ. Nke ka nma, kpọtụrụ nzukọ nwere ahụmịhe banyere imepe akaụntụ ndị dị n'akụkụ mmiri. Nzukọ anyị bụ ndị kacha ibu n'ụwa niile na enyere ndị chọrọ akụ mba ụwa aka.
Onegbanwe otu ego maka ozo nwekwara ike ibute ego mgbanwe. Gwọ mgbanwe ahụ ka bụ ihe na-agbanwe agbanwe na ntughari ego. Ọ bụ ya mere na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa Forex ụbọchị dị ka atụmatụ itinye ego na-efukarị.
Nweta Enyem Aka
Yabụ, ebumnuche ndị dị n'elu kwadoro nke ọma ihe mere o ji dị mkpa ịnwe enyemaka ọkachamara mgbe ị na-emepe akaụntụ akụ. Ndi okacha mara mara ulo oru nke lebara ndi ahia anyi anya nke oma. Anyị maara ụlọ akụ ga-emepe akaụntụ maka ndị bi na mba gị. Ọzọkwa, nchekwa akụ bụ ọchịchọ siri ike maka ndị ahịa anyị. Ya mere, anyị na-eme nyocha mgbe niile iji rụọ ọrụ nke ụlọ akụ tupu anyị akwado ha. N'agbanyeghị nke a, ọ bụghị ụlọ akụ niile na-ewere ọnọdụ dị ka ihe ego. Maka nke a, enwere ọnụọgụ dị n'elu maka gị ka gị na onye ọkachamara kwurịta mkpa gị. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike mezue mpempe akwụkwọ nyocha na ibe a.
You nwere ike tinye ego na ọdụ akụ nke ọdụ ụgbọ mmiri site na izipu mbufe ekwentị site na akaụntụ ụlọ akụ na nke gị. Enwere otu obere nchebara echiche maka mbufe a mgbe e mere ya n'ụlọ akụ na mba, na nke ahụ metụtara ụgwọ ndị ahụ. N'adịghị ka nnyefe waya mere n'etiti ụlọ akụ, mbufe izizi nke mba ụfọdụ na-emetụta ụgwọ a na-akwụ onye ahịa ya ka enyere ya ego ma ọ bụ anata ya. Onweghi ego maka ya, yabụ ndi ahia mba ofesi nwere ike choro ulo oru ndi n’enye ha ahia kachasi nma. Okacha mara, na ebe ndị anoghi ano ahia ndi ozo adighi ejikwa ego nlele (ndenye ego). Yabụ, nhọrọ kacha mma bụ nnyefe waya.
Dradọrọ ego n ’ụlọ ahịa gị dị n’okpuru dị mfe. Nke a bụ n'ihi na ụlọ akụ gị kwesịrị inye gị ATM ma ọ bụ kaadị debit. N'ụzọ ahụ, ego gị nwere ike ịnweta ụwa niile n'ụzọ dị mfe. Ugbu a, azụmahịa ndị a dịkwa n'okpuru ụgwọ ezi uche dị na ya. N’oge na-adịghị anya, ụlọ akụ dị n’akụkụ mmiri ga-enye ego ndenye ego, mana nke a abụghị usoro kwesịrị ekwesị iji wepụ ego maka ọtụtụ ndị ahịa. Mgbe ndenye ego ụlọ ọrụ na-enyocha onye ahịa ya, ihe nzuzo ya na-ebelata. O siri ike itinye ego na ego dọtara na ụlọ akụ nke mba ọzọ. Ọzọkwa, ịkpata ụdị ego ahụ nwere ike ịchọ oge echere ogologo oge.
Nhọrọ ọzọ dị mma bụ iji akaụntụ ndekọ ego, n'ụlọ akụ na nke mba ọzọ, n'otu n'otu. Site na nnyefe ekwentị, ịnwere ike izipu ego na akaụntụ gị na ọdụ ụgbọ mmiri n'ụlọ akụ gị. Yabụ inweta ego gị abụghị ihe okwu. Still ka na-enwe obi ụtọ nzuzo nke ụlọ akụ gị na-ahụ maka ihe ndị dị na mpụga ka ị na-eji ohere dị n'ụlọ akụ ụlọ.
Ụtụ isi obodo
Mgbe ị na-eme nyocha gị na akaụntụ akụ Oke osimiri, buru n'uche ụtụ obodo. Imirikiti ebe ndị dịpụrụ adịpụ nke anyị ji akụ adịghị etinye ụtụ isi mpaghara na akaụntụ mba ọzọ, ebe ndị ọzọ na-eme ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịnwe akaụntụ na Switzerland na dollar US enweghị ụtụ isi na Switzerland. Ọ bụrụ na mmadụ nwere akaụntụ na Switzerland Franc, onye na-etinye akaụntụ na-akwụ ụtụ Switzerland maka uru ndị ahụ.
Yabụ, nke ahụ ga - apụta ị kwụsị ịkwụ ụtụ isi ọ bụghị naanị maka obodo gị, kamakwa n'obodo ị na - etinye ego na bank. N’ụbọchị, ị na-ewepụ ụtụ isi mba ofesi n’ụtụ ụtụ isi ụlọ gị, yabụ nsonaazụ ya na-anọpụ iche.
Akaụntụ mba ụwa bụ otu na mba na-abụghị ókèala obodo gị. Jikọtara na ntụkwasị obi nchedo ihe dị na mmiri ọ bụ otu ụzọ kachasị mma iji chebe ihe gị. Bankslọ akụ ndị dị n’okpuru na-echebe ikikere ha site na isoro usoro iwu-ahịa-nke ndị ahịa chọrọ. Nke a pụtara na ị ga-enyerịrị akwụkwọ iwu kwadoro ụlọ akụ chọrọ.
Iji ego n'ime akaụntụ gị nke dị n'ụsọ dị mfe dịka ịfepu kaadị debit. Izipu ma nata ego n ’ụlọ akụ mba ụwa gị dị mfe dịka imefe mbufe waya.
You chọrọ imeghe akaụntụ akụ nke mba ọzọ? Ọ bụrụ otu a, biko jiri nọmba ekwentị dị n’elu. You nwere ike jupụta otu mpempe akwụkwọ na ibe a maka ozi ndị ọzọ kwa, awa 24 kwa ụbọchị.
<Isi nke 2
Isi nke 4>